Inona ny tolotra SEO afaka manatsara ny fahefam-pikatrohako?
Misy fanontaniana mahazatra ao amin'ny tontolo nomerika - "Ahoana ny anaran'ny anaran'ny sehatra SEO?" Mieritreritra ny olona sasany fa tsy misy fifandraisana amin'ireny lafiny ireny. Ny hafa mieritreritra fa manampy amin'ny fanoratana ny teny fikarohana amin'ny anaran-tserasera iray hanatsarana ny fikajiana ny habaka. Amin'ity lahatsoratra ity, dia hiezaka ny hanilika ny hevi-diso rehetra aho ary hanome valiny azo ekena amin'ny fanontaniana iray momba ny fifandraisana amin'ny fikarohana momba ny fikarohana.
Domain nomen'ny famaritana anarana
Andeha isika hanomboka amin'ny faran'ny hevitra. Ny anaran'anaran-doka dia anaran'ny marika aseho anao ho toy ny URL aterineto fohy. Izy io dia manondro ny mpampiasa amin'ny toerana manokana ao amin'ny aterineto izay nanorenanao ny loharanon'ny tranonkala. Ny anaran'ny sehatra dia ampiasaina hamantarana ny adiresy IP amin'ny tranonkala iray. Ohatra, fantsona. com dia anarana nomena ny orinasa nomerika, na www. semalt. com dia atao toy ny subdomain.
Ny sampan-draharaha matihanina sehatra matihanina dia manome ny mpanjifany afa-tsy amin'ny sehatra ambony indrindra raha heveriny ho kalitao kokoa. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona no sehatra ambony indrindra? Ny rambony amin'ny anaranao anaran-toerana izay toa ". fr. "Amin'ny ankapobeny tontolon'ny TLD dia manolotra tranokala vondrona. Nandritra ny folo taona farany, niova ny zava-drehetra. Amin'izao andro izao, ireo sehatra avo lenta toy ny "guru. "na" pro. "dia misy. Azonao atao ny mampihatra izany amin'ny tranonkalanao mba hahalalanao ny mombamomba anao.
Ny vanim-potoana iray dia sehatra iray manan-danja iray izay mampiseho ny fitaovam-pikarohana amin'ny fomba mahasoa ny sehatra misy anao. Miankina amin'ny votoatin'ny tranonkala, ny rafitra ary ny maha-zava-dehibe ny fangatahan'ny mpampiasa izany. Mba hametrahana ambony kokoa ao amin'ny Google dia tokony hisy roa taona farafaharatsiny ny sehatra misy anao.
Tsara ny manamarika fa nilaza i John Mueller solontenan'ny Google fa tsy misy fiantraikany eo amin'ny votoatin'ny tranonkala ny taonan'ny sehatra.Mazava ho azy fa tsy misy fiantraikany amin'ny toerana misy anao ny anaran'ny sehatra iray. Na izany aza, ireo sehatra taloha, amin'ny ankapobeny, dia manana backlinks maro izay manondro azy ireo. Ankoatra izany, ny bots tao amin'ny Google dia efa nizara ny votoaty anatiny sy ivelany. Izany no mahatonga azy ireo heverina ho mendri-piderana sy manam-pahefana kokoa eo imason'i Google.
Ahoana no mety ho fiantraikan'ny sehatra nomena ny SEO?
Ny orinasam-panatontosana rehetra dia manome sampan-draharaha SEO mitovy amin'izany, manomboka amin'ny serivisy fanatontosana teknika sy ny famaranana amin'ny marketing sosialy. Na dia manolotra tolotra mitovy amin'ny sehatra samihafa aza ireo masoivoho, dia mifototra amin'ny teoria tsy azo ovaina ihany izy rehetra. Ny fomba iray miorina amin'ny rehetra dia ny anaranao. Ireo manam-pahaizana SEO dia miasa eo amin'ny fanatsarana ny sehatra, amin'ny farany dia afaka manome fitokisana bebe kokoa izy, avo lenta kokoa, tanjona ambony kokoa ary ny fisainana bebe kokoa ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny fikarohana.
Na dia manatsara ny anaranao anaran-toerana aza, dia mila manome antoka fa alefany ireo mari-pamantarana marina mba hahazoana tombony be indrindra. Mila mamorona anaran-tsoratra tsy hay lazaina sy mahaliana ianao izay mifanandrify amin'ny iray amin'ny teny fikarohana mifandraika amin'ny habetsahanao.
Ny anaran'ny sehatra iray voafaritra tsara dia mirakitra famantarana sy marika famantarana Source .